‘एक मात्र मिर्गौलाको गाउँ’ जहाँ बाँच्नका लागि बेचिन्छ आफ्नै अङ्ग « Pariwartan Khabar
‘एक मात्र मिर्गौलाको गाउँ’ जहाँ बाँच्नका लागि बेचिन्छ आफ्नै अङ्ग
28 March, 2022 12:06 pm
अवस्था यतिसम्म खराब छ कि उनीहरु आफ्नो ऋण तिर्न र खाद्यान्न किन्नका लागि एउटा मिर्गौला नै बिक्री गर्नका लागि बाध्य हुने गरेका छन् ।
विश्वभरिनै मानव अङ्गको बिक्री अवैध रहँदै आएको छ । तर अफगानिस्तानमा यसको नियमन भएको छैन र दाताले लिखित सम्झौता गर्नुपर्नेछ । अङ्ग दान गरेपछि के हुन्छ ? यो कहाँ जान्छ ? कसैलाई पनि थाहा छैन । यस विषयमा चिकित्सकले उनीहरुले सोधपुछ गर्न नपाउने प्रतिबद्धताको माग गर्छन् ।
ओएनएफ वेस्टन अष्ट्रेलियाको अध्यक्षमा तेजेन्द्र विक्रम मल्ल र सचिवमा गोपाल घिमिरे सर्वसम्मत
हरसिद्धि जात्राको तयारी तीव्र